Sida loo kala saaro loona isticmaalo dharka go'doominta iyo dharka ilaalinta caafimaadka
Sida loo kala sooco dharka go'doominta iyo dharka difaaca caafimaadka iyo sida loo isticmaalo badanaa waxay ku jirtaa xaqiiqda ah in dharka difaaca caafimaadku uu yahay mid sii waara, heerka ilaalinta sare iyo waxqabadka kahortagga ka fiican dharka go'doominta. Marka lagu daro la kulanka dharka ...
Waa maxay booska suuqa mustaqbalka ee dharka Shiinaha ee aan tolmo wanaagsan lahayn?
1. Meesha mustaqbalka ee dharka aan tolmo wanaagsan lahayn waa mid weyn Iyadoo horumarka degdegga ah ee dhaqaalaha Shiinaha iyo dakhliga sii kordhaya ee dadka deegaanka, dalabka warshadaha aan tolmo wanaagsan lahayn si buuxda looma sii deyn. Tusaale ahaan, suuqa gogosha nadaafadda iyo xafaayadaha dhallaanka ayaa aad u ballaaran, oo leh ...
Warshadaha Shiinaha ee aan tolmo lahayn ayaa ka baxa habka astaamaha
Dhar aan tolmo lahayn ayaa ah nooc cusub oo ah qalabka ilaalinta deegaanka, oo sidoo kale loo yaqaan nonwovens, oo leh huffan, neefsasho, dabacsan, culeys fudud, gubasho aan sahlaneyn, fududahay in lakala baxo, sun aan sun ahayn oo aan xanaaq lahayn, midab hodan ah, qiimo jaban, dib loo warshadeyn karo iyo astaamo kale. Waa nooc ka mid ah ...